”ဒီဘဝတော့ ပြန်လာဖို့ လုံးဝမမျှော်လင့်နဲ့တော့ ပတ်သက်စရာအကြောင်းမရှိတော့ဘူး” – Cele Lover
”ဒီဘဝတော့ ပြန်လာဖို့ လုံးဝမမျှော်လင့်နဲ့တော့ ပတ်သက်စရာအကြောင်းမရှိတော့ဘူး”
တွတ်ပီကို”ဒီဘဝတော့ ပြန်လာဖို့ လုံးဝမမျှော်လင့်နဲ့တော့ ပတ်သက်စရာအကြောင်းမရှိတော့ဘူး” လို့ အသိတွေကဆင့် ပြောခိုင်းခဲ့တဲ့ ဖခင်ဖြစ်သူ တေးရေး စောခူဆဲအကြောင်းပြောပြလာတဲ့ ရေမွန်မိခင်ရဲ့ ဗီဒီယိုဖိုင်
ပရိတ်သတ်ကြီးရေ…နိုင်ငံကျော်အဆိုတော် ရေမွန်(ခ)တွတ်ပီ (Idiots Band ) ဇွန် ၂၃ ရက်မနက်ပိုင်း က အစာအိမ်သွေးကြောပေါက်ရောဂါနဲ့ ဆုံးပါးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ရေမွန်ဟာ Idiots ဂီတအဖွဲ့နဲ့အတူ “လူအဂီတ” ပွဲဦးထွက် စီးရီးထွက်ရှိခဲ့ပြီး တေးသီချင်းတွေကိုလည်း ကိုယ်တိုင်ရေးသားသီဆိုခဲ့တဲ့ လူငယ်အဆိုတော်တစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။
ရေမွန် ကွယ်လွန်ခဲ့တဲ့အတွက် နိုင်ငံတဝန်း ရေမွန်ရဲ့ ပရိသတ်အမြောက်အများက လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာမှာ ရေမွန်အတွက် ဝမ်းနည်းကြောင်းဆုတောင်း ပေးခဲ့ကြတာပါ။ရေမွန်ရဲ့မိခင်ဒေါ်ခင်မြတ်မွန်ဟာဆိုရင် သားဖြစ်သူဆုံးပါသွားတာကို
ခုထက်တိတိုင်လက်မခံနိုင်ပါသေးဘူးနော်.။ဒီတစ်ခါမှာဆိုရင်လည်း ဒေါ်ခင်မြတ်မွန်ကသားဖြစ်သူရေမွန်အပေါ်ဖခင်စောခူဆဲရဲ့ရက်စက်လွန်းတဲ့စိတ်ဒဏ်ရာတွေအမျိုးမျိုးပေးခဲ့တဲ့အကြောင်းကို ပရိတ်သတ်တွေအား အင်တာဗျူးတစ်ခုကနေ အခုလိုပဲရင်ဖွင့်ပြောပြလာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။
အဲ့ဒါကတော့” တွတ်ပီကို တရားဝင်သူ့သားဆိုပြီး ဘယ်တုန်းကမှ အသိအမှတ်မပြုခဲ့ဘူး။အင်တာဗျုးတွေ လာတိုင်းလည်းရှောင်ဖယ်ပြီးဖြေတယ်။မျက်နှာ ပြောင်ပြောင် နဲ့ ကျွန်တော်က သမီးပဲမွေးထားတာ။
သား မမွေးထားဘူးဆိုပြီးရက်ရက်စက်စက် လူမဆန်သူမဆန် ဖြေရဲတဲ့ အဖေပေါ့….”ဆိုပြီးသားဖြစ်သူရေမွန်အပေါ်ရက်ရက်စက်စက်ပြုမူခဲ့ပုံတွေကိုပြောပြလာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်နော်.
။ဒေါ်ခင်မြတ်မွန်ရဲ့အင်တာဗျူးအပြည့်အစုံကို ပရိတ်သတ်ကြီးအားတစ်ဆင့်ကူးယူတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်။ရေမွန်(ခေါ်)တွတ်ပီရဲ့ဆိုးရွားလွန်းတဲ့ ဘဝအကြောင်းကိုနားထောင်ရင်းမျက်ရည်ဝဲမိတာတော့အမှန်ပဲနော်..
။နောက်ဘဝများရှိခဲ့ရင် တွတ်ပီတစ်ယောက် မိသားစုစုံစုံလင်လင်နဲ့ဘဝကိုပျော်ရွှင်စွာဖြတ်သန်းနိုင်ပါစေလို့ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်..။ဖတ်ရှုပေးတဲ့ ပရိတ်သတ်ကြီးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်.။
တြတ္ပီကို”ဒီဘဝေတာ့ ျပန္လာဖို႔ လုံးဝမေမွ်ာ္လင့္နဲ႔ေတာ့ ပတ္သက္စရာအေၾကာင္းမရွိေတာ့ဘူး” လို႔ အသိေတြကဆင့္ ေျပာခိုင္းခဲ့တဲ့ ဖခင္ျဖစ္သူ ေတးေရး ေစာခူဆဲအေၾကာင္းေျပာျပလာတဲ့ ေရမြန္မိခင္ရဲ႕ ဗီဒီယိုဖိုင္
ပရိတ္သတ္ႀကီးေရ…ႏိုင္ငံေက်ာ္အဆိုေတာ္ ေရမြန္(ခ)တြတ္ပီ (Idiots Band ) ဇြန္ ၂၃ ရက္မနက္ပိုင္း က အစာအိမ္ေသြးေၾကာေပါက္ေရာဂါနဲ႔ ဆုံးပါးခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ေရမြန္ဟာ Idiots ဂီတအဖြဲ႕နဲ႔အတူ “လူအဂီတ” ပြဲဦးထြက္ စီးရီးထြက္ရွိခဲ့ၿပီး ေတးသီခ်င္းေတြကိုလည္း ကိုယ္တိုင္ေရးသားသီဆိုခဲ့တဲ့ လူငယ္အဆိုေတာ္တစ္ဦးျဖစ္ပါတယ္။
ေရမြန္ ကြယ္လြန္ခဲ့တဲ့အတြက္ ႏိုင္ငံတဝန္း ေရမြန္ရဲ႕ ပရိသတ္အေျမာက္အမ်ားက လူမႈကြန္ရက္စာမ်က္ႏွာမွာ ေရမြန္အတြက္ ဝမ္းနည္းေၾကာင္းဆုေတာင္း ေပးခဲ့ၾကတာပါ။ေရမြန္ရဲ႕မိခင္ေဒၚခင္ျမတ္မြန္ဟာဆိုရင္ သားျဖစ္သူဆုံးပါသြားတာကို
ခုထက္တိတိုင္လက္မခံႏိုင္ပါေသးဘူးေနာ္.။ဒီတစ္ခါမွာဆိုရင္လည္း ေဒၚခင္ျမတ္မြန္ကသားျဖစ္သူေရမြန္အေပၚဖခင္ေစာခူဆဲရဲ႕ရက္စက္လြန္းတဲ့စိတ္ဒဏ္ရာေတြအမ်ိဳးမ်ိဳးေပးခဲ့တဲ့အေၾကာင္းကို ပရိတ္သတ္ေတြအား အင္တာဗ်ဴးတစ္ခုကေန အခုလိုပဲရင္ဖြင့္ေျပာျပလာခဲ့တာပဲျဖစ္ပါတယ္။
အဲ့ဒါကေတာ့” တြတ္ပီကို တရားဝင္သူ႔သားဆိုၿပီး ဘယ္တုန္းကမွ အသိအမွတ္မျပဳခဲ့ဘူး။အင္တာဗ်ဳးေတြ လာတိုင္းလည္းေရွာင္ဖယ္ၿပီးေျဖတယ္။မ်က္ႏွာ ေျပာင္ေျပာင္ နဲ႔ ကြၽန္ေတာ္က သမီးပဲေမြးထားတာ။
သား မေမြးထားဘူးဆိုၿပီးရက္ရက္စက္စက္ လူမဆန္သူမဆန္ ေျဖရဲတဲ့ အေဖေပါ့….”ဆိုၿပီးသားျဖစ္သူေရမြန္အေပၚရက္ရက္စက္စက္ျပဳမူခဲ့ပုံေတြကိုေျပာျပလာခဲ့တာပဲျဖစ္ပါတယ္ေနာ္.
။ေဒၚခင္ျမတ္မြန္ရဲ႕အင္တာဗ်ဴးအျပည့္အစုံကို ပရိတ္သတ္ႀကီးအားတစ္ဆင့္ကူးယူတင္ဆက္ေပးလိုက္ပါတယ္။ေရမြန္(ေခၚ)တြတ္ပီရဲ႕ဆိုး႐ြားလြန္းတဲ့ ဘဝအေၾကာင္းကိုနားေထာင္ရင္းမ်က္ရည္ဝဲမိတာေတာ့အမွန္ပဲေနာ္..
။ေနာက္ဘဝမ်ားရွိခဲ့ရင္ တြတ္ပီတစ္ေယာက္ မိသားစုစုံစုံလင္လင္နဲ႔ဘဝကိုေပ်ာ္႐ႊင္စြာျဖတ္သန္းႏိုင္ပါေစလို႔ဆုေတာင္းေပးလိုက္ပါတယ္..။ဖတ္ရႈေပးတဲ့ ပရိတ္သတ္ႀကီးကိုအထူးပဲေက်းဇူးတင္ရွိပါတယ္.
“သိချင်ရင် အကုန် လာမေး.. အမှန်အတိုင်း ပြောပြပေးမယ်” ဆိုပြီး ပွဲကြမ်းလိုက်တဲ့ ဘုန်းမင်းနေလ
သူ့ရဲ့ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ ကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သတ်ပြီး ပရိသတ်တွေကို တောင်းပန် လိုက်တဲ့ စည်သူဝင်း
၆နှစ်ကြာတွဲလာတဲ့ချစ်သူကောင်မလေးရဲ့နောက်ကွယ်မှာ ယွန်းယွန်းနဲ့ ဖောက်ပြန်နေတဲ့ စည်သူ၀င်း
Previous Article တိုကျို (၂၀၂၀)အိုလံပစ် ပြိုင်ပွဲကြီးမှာ ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်နိုင်ဖို့ ဝင်ခွင့်ရရှိခဲ့တဲ့ သက်ထားသူဇာ
Next Article “အရေးပေါ် အောက်စီဂျင် လိုအပ်နေသူများအတွက် ရန်ကုန်မြို့ / မန္တလေးမြို့ တွင် အောက်စီဂျင်ရနိုင်သော နေရာများ “
NUG ရဲ့ ငွေတိုက်စာချုပ်၀ယ်ယူသူတွေကို အကြမ်းဖက်ဥပဒေနဲ့ အရေးယူမယ်လို့ ဗိုလ်ချုပ်ဇော်မင်းထွန်း ခြိမ်းခြောက်
မြန်မာပလာဇာမှာဖြစ်တဲ့ လူငယ်တွေကိစ္စကို ဒဲ့ဝေဖန်ထောက်ပြလိုက်တဲ့ အကယ်ဒမီရဲအောင်